Basa reECG reApple Watch richakurumidza kuwanikwa muSouth Korea neRussia | Ndinobva mac
Basa reECG reApple Watch richakurumidza kuwanikwa muSouth Korea neRussia
Chimwe chezvinhu zvikuru zveApple Watch ndiko kugona kwayo kuongorora hutano hwemushandisi. Imwe yemabasa aya mukana wekuita iyo electrocardiogram matiri kunyeverwa nezve zvinogona kuitika matambudziko emoyo. Basa rakaratidzirwa kuchengetedza hupenyu hwakawanda uye Ichakurumidza kuwanikwa muSouth Korea neRussia.
South Korea neRussia vabvumirana kugadzirisa basa reECG paApple Watch
Apo Apple yakaburitsa iyo electrocardiogram (ECG) chimiro pane iyo Apple Watch, haisi kuwanikwa munyika dzese zvakaenzana. Sezvo iri nyaya yehutano, inoda kupihwa mvumo nemitumbi inoenderana nenyaya iyi mune yega yenyika dzainotarisirwa kushandiswa. Zvine musoro kuti iyo US ndiyo yaive yekutanga kuve neiyi nyowani mashandiro. Colombia ichangobva kujoina uye mukati me prune tichava nekushanda kunoshanda muSouth Korea neRussia.
ECG yakaratidza kasingaverengeke izvo inoshanda kuponesa hupenyu. Pane dzimwe nhambo iwe yambira wako mushandisi wematambudziko emoyo uye mushure mekucherechedzwa navanachiremba vakaona kuti dai yanga isiri iyo wachi, pamwe angadai akafa.
Apple yataura kuti basa iri richawanikwa munguva pfupi muSouth Korea neRussia uye richadaro ichawedzera kuburikidza Inouya software inogadziridza yeIOS 14.2 uye WatchOS 7.1. Hazvizivikanwe zuva chairo rekujoinha izvi zvichaitika, ndiko kuti, apo masisitimu anoshanda achazotangwa kune vese vateereri, inofanira kunge iri pfupi ye beta kuburitswa kuri kutora nzvimbo.
Kune zvishoma uye zvishoma uye munguva pfupi zvinotarisirwa kuti kushanda kweECG inogona kuwanikwa kune vese vashandisi pasi. Izvo zvinoenderana nesangano rega rega rehutano munyika yega yega, asi zviri pachena kuti kushanda kwayo kwatoratidzwa. Saka, inyaya yenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reECG reApple Watch richakurumidza kuwanikwa muSouth Korea neRussia
Christopher Walken ajoina mutambi weSeverance
Kwayedza Flight chikuva inogona kumhara pane macOS svondo rinouya